::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather विश्वकप फुटबल शुभारम्भ दबाबमा खेल्दै रुस, साउदीको मनोबल उच्च:: Rojgar Manch ::
विश्वकप फुटबल शुभारम्भ दबाबमा खेल्दै रुस, साउदीको मनोबल उच्च
विहिवार, २०७५ जेष्ठ ३१ गते २२:४५
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको पखाई आज बिहिबार सकिँदैछ । मस्कोस्थित लुजिन्की रङ्गशालामा आयोजक रुसले उद्घाटन खेलमा सउदी अरबको सामना गर्नेछ । सोही रङगशालामा फाइनलमा पनि खेलाइनेछ ।
रुस र साउदी अबरविरुद्धको उद्घाटन खेलले पक्कै पनि विश्वको ध्यान तान्ने देखिँदैन । किनभने यस विश्वकपमा सबभन्दा तल्लो वरीयताका दुई टिमबीच पहिलो खेल हुँदैछ । विश्वकपमा रुस सबभन्दा तल्लो वरीयताको टिम हो । फिफा वरीयतामा ७० औँ स्थानमा रहेको रुस आयोजकको नाताले मात्र विश्वकप खेल्न योग्य भएको हो । साउदी पनि फिफा वरीयतामा ६७ औँ स्थानमा छ ।
विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक रुसलाई ड्रबाट सबभन्दा ठूलो डर थियो । विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक पहिलो चरणबाटै बाहिरिनु परेको इतिहास अहिलेसम्म एकपटक मात्र छ । सन् २०१० मा आयोजक दक्षिण अफ्रिका पहिलो चरणबाट बाहिरिएको थियो । रुस सो इतिहासलाई दोहर्याउन चाहँदैन । विश्वकप २०१८ को ड्र रुसले चाहेजस्तै भएको छ । उसको समूह एमा इजिप्ट र पूर्व विजेता उरुग्वे पनि छ । रुसले घरेलु मैदानमा समूह चरण पार गर्ने सम्भावना धेरै भएको छ ।
यसका लागि रुसले सबभन्दा पहिले सउदी अरबलाई पन्छाउनुपर्ने हुन्छ । तर रुस राम्रो लयमा छैन । रुसले पछिल्ला सात खेलमा जित हासिल गर्न सकेको छैन । सउदी अरब पनि तीन खेलदेखि जितविहिन छ । तर पनि १२ वर्षपछि पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै गरेको साउदी अरबलाई गुमाउनु केही छैन । पछिल्लो अभ्यास खेमला विश्व विजेता जर्मनीविरुद्ध २–१ ल्े हारेको खेलमा गरेको शानदार प्रदर्शनले एसियाली राष्ट्र साउदी अरब उच्च मनोबलमा रुसविरुद्ध खेल्नेछ ।
हुँवा एन्टोनियो पिजी र स्टानिस्लाभ चेर्चेसोभ फरक व्यक्तित्व र फरक रणनीति अपनाउने प्रशिक्षक हुन् । सउदी अरबका प्रशिक्षक पिजीले सन् २०१६ मा चिलीलाई कोाप अमेरिकाको उपाधि दिलाएका थिए । सो प्रतियोगितामा पिजीले विपक्षीमाथि लगातार आक्रमण गर्ने रणनीति अपनाएका थिए । तर उनको सोही रणनीतिमा सउदी अरब सङ्घर्षरत देखिएको छ । प्रमुखतः विश्वकपमा चयन भइसकपछि सउदी अरबलाई सो रणनीतिमा भिज्न कठिन भएको छ ।
रुस्ी टिमको भार सम्हालेका चेर्चेसोभ भने रक्षात्मक खेलमा विश्वास गर्ने प्रशिक्षक हुन् । तर मैदानबाहिर उहाँको व्यक्तित्व आक्रामक छ । हालै आप्mनो टिमको खराब लयलाई लिएर डराइरहेका रुसी समर्थकलाई के सन्देश भन्ने सञ्चारमाध्यमको प्रश्नमा प्रशिषक चेर्चेसोभले आफू सबैलाई सान्त्वना दिँदै हिड्ने मनोचिकित्सक होइन, भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
रुसी टिममा चोटको समस्या
विश्वकप फुटबलको तयारी गर्दा रुसलाई खेलाडीहरुको चोटले निकै दुःख दिएको थियो । फरवार्ड अलेक्जयान्दर कोकोरिन तथा डिफेन्डरदय जर्जी जिकिया र भिक्को भासि घुँडाको चोटले अहिले पनि समस्यामा छन् । जसले गर्दा प्रशिषक चेर्चेसोभले अन्तिम समयमा आप्mनो रणनीति परिवर्तन गर्न बाध्य भए । प्रशिक्षक चेर्चेसोभले अस्ट्रियाविरुद्धको अभ्यास खेलमा आफ्नो चार जनाको डिफेन्स राख्ने स्वभावलाई तिलाञ्जलि दिँदै पछाडि तीन खेलाडी र एक विन्गर राखेर खेलाएका थिए । तर रुस १–० ले हार्यो , अझ रुसले एक पटक पन विपक्षीको गोलपोस्टमा प्रहार गर्न नक्दा चिन्ता झन् गहिरो भएको छ ।
रुस् र साउदी अरब दुवै टिमका खेलाडीको औसत उमेर २९ वर्ष रहेको छ । जुन प्रतियागिता सर्वाधिक औसतमा पर्न आउँछ । यद्यपि दुवै टिमका दुई खेलाडील् सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन् । रुसी टिममा कप्तान तथा गोलरक्षक इगोर अकिनफिभसँगै १०५ अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको अभुनव छ । ३८ वर्षीय प्रमुख डिफेन्डर सर्जी इगनासेभिाले पनि राष्ट्रिय टिमको जर्सीमा १२१ ख्ेल खेलिसकेका छन् । सउदी अरबका लागि आसामा हसावीले १३५ र मिडफिल्डर तजर अल जसिमले १३२ क्याप जितेका छन् ।
ओलम्पिक्समा डोपिङ काण्डमा नराम्ररी मुछिएको थियो रुस । जसले गर्दा रुसले गत वर्ष शीतकालीन ओलम्पिक्सबाट पनि प्रतिबन्धित भयो । उसका केही खेलाडीले ओलम्पिक्सको झन्डा मुनि प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भए । रुसको विश्वकप फुटबलको अयोजना नै खोसिने सम्भावना थियो । रुसको विश्वकपको प्रारम्भिक टिममा परेका रुस्लान काम्बालोभाथि डोपिङलाई लिएर फिफाको अनुसन्धान भइरहेको छ । जुन मामिला सकिसकेको भनिएपनि फिफाबाट यो कुरा आएको छैन ।
सउदी अरबका युवा विङरगर हुन् फहाद अल–अुवालाद । आफनो खेल जीवनमा शानदार सुरुवात गरेपछि उनी युरोपोली क्लबहरुको नजरमा परिसकेका छन् । यस वर्ष फहाद भाँडामा स्पेनको लाभान्टेमा आवद्ध भए । स्पेनी लिगमा फवादले खासै मौका भने पाउन सकेनन् । यद्यपि उनी विपक्षी टिमलाई नोक्सान पार्नसक्ने खेलाडी हुन् । फहाद छोटो कद ९५ फिट ६ इन्च०का छन् । तर तीब्र गति र बललाई आप्mनो खुट्टासँगै राख्नेसक्ने खुबीले उनी खतरनाक बन्छन् । प्रत्याक्रमणमा फरवर्डा अल सलावीसँग उनको साझेदारी राम्रो बन्ने गर्छन् ।
डेनिस चेर्सेभ (रुस)
वेन्गर डेनिस चेर्सेभलाई रुसी टिमका सर्वाधिक प्रतिभालशाली खेलाडी भन्दा फरक पर्दैन । सन् २००२ मा रियल म्याड्रिडले आप्mनो युथ टिमका लागि विश्वास गरेका चेर्सभ त्यसपछि स्पेनीकै उत्कृष्ट क्लबहरु भिलारियल र भ्यालेन्सिया पुगे । अहिले पूर्णरुपमा भिलारियलमा आवद्ध चेर्सेभ खेललाई कुनै पनि क्षणमा बदल्नसक्ने सिर्जनात्मक खेलाडी हुन् । यद्यपि अहिले चेर्सेभ दुरुस्त छैनन् यद्यपि उहाँले आप्mनो शतप्रतिशत खेल देखाएमा रुस फरक टिमको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ ।
आज खेल्ने राष्ट्रहरु तथ्याङ्कमा
– विश्वकपमा सउदी अरबको यो पाँचौँ सहभागिता हो । जसमध्ये उसको उत्कृष्ट प्रदर्शन सन् १९९४ मा प्रिक्वाटरफाइनलसम्मको यात्रा हो ।
– चौथो पटक विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदै गरेको रुस यसअघि आफूले खेलको तीन संस्करणमा समूह चरणबटा विदा भएको थियो ।
– रुस र सउदी अरबबीच अहिलेसम्म मात्र एक खेल भएको छ । सन् १९९३ मा खेलिएको मैत्री खेलमा सउदीले घरेलु मैदानमा रुसलाई ४–२ ले हराएको थियो ।
– विश्वकपमा पछिल्ला पाँच खेलमा रुस जितविहिन ९दुई बराबरी, तीन हार० छ । तत्कालीन सोभियत संघको विखण्डनपछि रुसले विश्वकपमा मात्र दुई खेल जितेको छ ।
– सउदी अरबले आफूले विश्वकपमा खेलेका १३ खेलमध्ये एक खेल मात्र जितको छ । सन् १९९४ मा सउदीअले बेल्जियमलाई १–० ले स्तब्ध पारेको थियो । सउदी अरबले विश्वकपमा खेलेका पछिल्ला नौमध्ये सात खेलमा गोल पनि गर्न सकेको थिएन ।
1. चिनिया रेलले काठमाडौं जोड्ने प्रतिवद्धता
2. डा. उपेन्द्र देवकोटाप्रतिको अन्तिम श्रद्धाञ्जलि
3. प्रधानमन्त्री ओली औपचारिक भ्रमणमा चीन प्रस्थान
4. वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा उपेन्द्र देवकोटाको निधन, मंगलबार अपरान्ह अन्तेष्टि गरिने
5. तातोपानी नाका छिटो सञ्चालनको पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह
6. तातोपानी नाका आगामी वर्षदेखि खुल्ने
7. विश्वकप फुटबल शुभारम्भ दबाबमा खेल्दै रुस, साउदीको मनोबल उच्च
8. प्रधानमन्त्री ओलीकोको चीन भ्रमण असार ५ मा तय
9. राजदूत नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड तयार पारिँदै
10. डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनबीच महत्वपूर्ण दस्तावेजमा हस्ताक्षर
11. राजधानीको युएनपार्कमा गोली चल्यो, गुण्डा नाइके लामा घाइते
12. ‘म्याच फिक्सिङ’को आरोप लागेका ६ खेलाडीलाई सफाइ
13. सुन काण्डका फरार अभियुक्त एसएसपी खत्रीले गरे अदालतमा आत्मसमर्पण
14. औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न कतारसँग आग्रह
15. अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सट्टेबाजी खेलाउने पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी अञ्जनसहित ६ जना पक्राउ
16. नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, बजेट ल्याउन खुल्यो बाटो
17. नयाँ अमेरिकी राजदूत नेपाल आउदै, को हुन् र्‍यान्डी ?
18. चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन कानमपा र चिनियाँ कम्पनीबीच सम्झौता
19. केन्द्र सरकारमा २१ प्रतिशत कर्मचारीमात्र रहने, सबैभन्दा धेरै स्थानिय तहमा
20. सुन तस्करीका मुख्य नाइके चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ पक्राउ
21. आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको घोषणा
22. आजबाट त्रिभुवन विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा आउने
23. नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेल बनाउन विश्वव्यापी टेन्डर खोलियो, लागत करिब दुई खर्ब
24. सिन्डिकेट हटाउन भूमिका खेलेका महानिर्देशकलाई मन्त्री महासेठले हटाए
25. आउदो सोमवार संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश हुदै
Results 725: You are at page 1 of 29